Alahady 12 Janoary 2020 - FJKM Amparibe Famonjena
ALAHADY 12 JANOARY 2020
Alahadin'ny Mpanao Raharahan'ny Fiangonana
« Dia nametraka ny tànany taminy Izy; ary niaraka tamin'izay dia nitraka ravehivavy sady nankalaza an'Andriamanitra. » (Lioka 13:13)
Alahady faharoa amin’ny taona androany ary manohy hatrany ny fibanjinana ny lohahevitra « Maneho ny tana-maheriny ny Tompo Andriamanitra ». Ny Vaomieran’ny Aim-panahy no niandraikitra ny fotoana ka ny Diakona Rakotonirina Tsiry no nitarika ary ny Diakona Rajaofetra Philippe sy Rabearison Bakoly no nanatanteraka ny vavaka sy ny vakiteny. Nandray Evanjelisitra ny fitandremana anio ka ny mpitandrina Rakotondramanana Fitiavantsoa, miandraikitra ny fitandremana Ambohimahamasina Fitarikandro, Sp Ambalavao Tsieniparihy no nivahiny ary nitondra ny hafatra. Ny litorjia amin’ny endriny faharoa no nitondran’ny mpitarika ny fotoana.
FIANTSOANA SY FIDERANA AN'ANDRIAMANITRA
Ny I Tantara 29 :10b-13 no novakiana nentina niderana an’Andriamanitra. Natao ny Ffpm 750 : 1, 2, 3, 4, 5 ho hira fiderana Azy avy eo. Nanao ny vavaka fisaorana sy fiderana an’Andriamanitra ny mpitarika satria Izy no manana ny hery lehibe ary nangataka ny fanananaran’ny Fanahy Masina mandritra ny fotoana. Nisy avy hatrany ny feon-javamaneno.
Zoky Fanja, mpampianatra k6, no nitarika izany. Natomboka tamin’ny hira Ffpm 779 :1 izany ary nitondra tantara ho an’ny ankizy izy avy eo. Ny tantara nentina dia ilay mpivady nitondra apondra. Raha handeha izy ireo dia nitaingina Ramatoa ka Rangahy handeha an-tongotra. Notenenin’ny olona izy ireo hoe tsy ny lehilahy mahay mitaingina ve no tokony hitondra. Niakatra indray Rangahy ka Ramatoa nandeha tongotra. Nahazo tsikera indray ireo hoe tsy mba manasa vehivavy koa ilay ramose fa vehivavy indray no mandeha tongotra. Samy tsy nisy nitaingina izy mivady ny farany fa samy nandeha tongotra ka nolatsain’ny olona indray fa hoe misy apondra eo dia tsy handehanana fa mandeha tongotra.
Na inona na inona ataonao dia tsy maintsy misy mitsikera foana. Izany no nahatonga ny mpitarika nandray ny Kolosiana 4 :6a « Aoka ny fiteninareo ho amin’ny fahasoavana mandrakariva ». Raha manao teny mahery sy mandatsa olona foana manko isika dia mety hitarika ilay olona amin’ny lalana tsy izy. Ny feon’Andriamanitra foana no tokony henoina.
Natao ny Ffpm 68 : 1 mialoha ny vavaka sy ny vakiteny. Nanao ny vavaka sy namaky ny Soratra masina ireo tompon’andraikitra. Ny perikopa anio dia ny Eksodosy 3 : 15-22, Lioka 13 : 10-13, Rom 1 : 18-23. Natao ny Ffpm 44 :1, 4 mialohan’ ny hafatra.
Ny Mpitandrina Rakotondramanana Fitiavantsoa, Fjkm Ambohimahamasina Fitarikandro, Sp Ambalavao Tsieniparihy, no nitondra ny hafatra. Manambady mananjanaka efatra izy dia 18 taona, 16 taona, 14 taona ary 4 taona.
Ny hahafantarana io toerana io misy azy io dia any Ambondrombe, toerana malaza amin’ny fizahantany. Ao koa nefa no misy ny toby lehibe fifohazana. Mitondra Fiangonana fito izy. 15 km ny lavitra indrindra ary 3 km ny akaiky indrindra. Alamina ho fotoam-pivavahana roa ny alahady iray. Rehefa misy ny fahoriana dia handehanana avoaka ireo, dia toy izay ihany koa rehefa misy ny fifaliana.
Ny filazantsara araka ny Lioka no nitondra ny hafatra. Tena Andriamanitra mankahery tokoa ity Andriamanitra ivavahantsika ity.
Ny taona 2020 moa dia ahitana isa 20 miverina indroa. Raha nanao fandalinana ny mpitandrina dia nilaza fa efatra foana no hanaovana kajy dia ny « x », «-», « +» , « /».
Raha atao ny « -» : dia milaza tsy fisiana 0. Mila vonona hiatrika izany isika. Ao anatin’izany dia mila fitodihana an’Andriamanitra hatrany.
Raha « +» : 40 : ahatsiarovana ny 40 taona tany an’efitra tamin’ny zanak’Israely, ny safodrano, fizahantoetra nefa aorina’izany rehetra izany dia hisy ny fiadanana
Raha « x» : 400 : taona iray 365 andro. 400 taona ao amin’ny soratra masina dia niaretan’ny Israely tany Égypte.
Tena mampahery antsika Andriamanitra amin’izany rehetra izany. Eo amin’ny andininy 12 : « … afaka ny rofinao ». Amin’ny alalan’ny antson’Andriamanitra no hanalany ny aretinao. Ity vehivavy ity dia nitady fankasitrahana foana ary efa narary nandritra ny 18 taona.
Andriamanitra rehefa miantso dia amin’ny fotoana tsy ampoizina. Miantso ny mpanompo Jesoa Kristy mba hanao ny asany. Mitety vazantany ny fiantsoan’Andriamanitra. Isika rehetra dia samy olona efa nantsoina avoakoa. Ny fanompoana nefa dia mety amin’ny alalan’ny talenta izay nomen’Andriamanitra antsika. Ny talenta nomeny antsika izany dia efa fiantsoana avy Aminy. Rehefa nanomboka nantsoina isika nanomboka teo amin’ny sakrametan’ny batisa, rehefa nahatsapa izany ka nanolorana dia tokony hiantso ny olona hafa ihany koa isika. Misy antso roa no efa misy : ny voalohany dia ny antso ho an’ ny Fiangonana, ary ny faharoa dia ho an’ ny tsirairay. Izay manao ny asan’Andriamanitra dia tsy tokony mandray antso fotsiny fa mijery ihany koa ireo olona efa nantsoina.
Eto amin’ny perikopa eto dia vehivavy no fanoharana ary izy dia narary nandritra ny 18 taona. Efa niharitra ny mafy. Hitan’i Jesoa nefa izany aretiny izany ka nafahany tamin’ny rofiny izy ka nositraniny. Rehefa nandray izay ravehivavy dia nankalaza Azy. Fankalazana Azy izany no porofo iray haseho fa nandray avy amin’ny Tompo hianao. Nametrahan’Andriamanitra ny zanany isika hanehoany ny voninahiny mba tsy hananjava-mahory isika.
Fijoroana vavolombelona maro tamin’ny fiainany no nambaran’ny mpitandrina nitondra ny hafatra. Tany Mananjara nandritra ny 4 taona ary nafindra amin’izao toerana misy azy ankehitriny izao. Any ny trano dia aorina eny amin’izay manakaiky ny toeram-piasan’ireo olona. Tsy misy taitra izy ireo satria dia vilany sy sotro no ao anatiny. Amin’ny bozaka no hanaovana ny trano ary tsy mihidy. Tsy matahotra ny ho very entana. Ny hanatra noraisin’ny mpitandrina tamin’izay dia tokony tsy manana ahiahy eo amin’ny fiainana rehefa miaraka amin’ny Tompo. Sarotra ny ady miandry eo ampanaovana ny asan’ ny Tompo nefa mahatsiaro ireo mpanompo fa misy Andriamanitra ary manampy ny Tompo.
Samy tana-maherin’Andriamanitra na ny Fiangonana manampy na ny mpitandrina hirahina ka samy nankahereziny mba ahatontosa ny adidy sy ny hazakazaka izay atao ary rehefa atao izany dia ataovy ho voninahitr’Andriamanitra irery ihany.
Taorian’ny hafatra dia nanao ny hira ny Staf « Tsaroanao va re ?».
VAVAKA FIFONANA SY TENY FAMELAN-KELOKA
Natao ny vavaka Fifonana ary rehefa izany dia nambara ny famelankeloka izay nalaina tao amin’ny Jeremia 31 : 3, Zakaria 3 : 4, II korintiana 5 :21.
Ho fanaovazana ny finoana dia samy nanambara ny fanekempinoana faharoa ny mpiara-mivavaka.
Taorian’ny feon-javamaneno dia nambara ny raharaham-piangonana.
Amparibe famonjena mahatahiry ny finoana, mifankatia, miasa amin’ny fahazotoana. Ireto manaraka ireto dia anisan’ny voalaza :
Fanentanana ny amin’ny fotoam-pivavahana fanombohana taom-piasana 2020 an’ ny Fjkm sy fiarahabana ny ray amandreny filohan’ny Fjkm ny Alahady 19 Janoary 2020 eny amin’ny Coliseum Antsonjombe.
Setela : Misokatra ny fisoratana anarana manomboka ny 15 Janoary
Mpitandrina Rasoanaivo Rina, mankalaza 25 taona ny 22 febroary 2020
Alahadin’ny mpanao raharaha ny anio
Rakitra rehetra dia ho amin’ny asan’ny Fiangonana ary misy rakitra varavarana
Misy Batisa anio eo amin’ny asa vavolombelona sy fandraisan-tanana ireo mpanao raharaha
Mianatra ny katekomena : lesona anio « Trinité masina »
Ny fiheveran-draharaha dia ny 26 janvier
Rakitra sy voady : 4 124 300 Ar
Hasin’ny famonjena dia nanao varavarana misokatra ny Sabotsy 25 janoary am 11h, ary misy koa famarotana bokinkira
Vaomiera fifandraisana dia handray ireo nahazo fahasoavana ny Alahady 26 janoary
Niompana tamin’ireto ny fanentanan’ny Mpitandrina :
Fitrotroana am-bavaka ireo hiditra Setela
Fanamafisana ny fanompoam-pivavahana ny 19 Janoary eny Antsonjobe
Ny rakitra am-baravarana ho an’ny Evanjelistra nitoriteny
Misy telo ireo nanao rakitra sy voady ka nangataka ny hira « Misaotra anao izahay » sy ny « Ff12 ». Ho fanolorana ny rakitra dia natao ny Ffpm 75 : 3
Nisy roa ny asa vavolombelona dia ny batisa sy ny fandraisan-tanana ireo mpiasam-piangonana.
Teo amin’ny batisa dia natao ny hira Ffpm 248 :1-2 ary niakatra ireo ho atao batisa sy ny fianakaviana. Miisa 11 ireo : Andriamahatana Arinoa, Andriamahatana Ariela, Rasaminarivo Tiavintsoa, Rasaminarivo Finoantsoa, Rasaminarivo Manjary, Rasaminarivo Nayah, Razafimahefa Hantsa, Maroherimiah Solomameno, Nomenjanahary Vahatra, Rabenasolo Eliasy, Monjaharison Heriasy.
Fiarahabana ireo mpanao raharaha
Ireto avy ireo sokajin’olona noraisintanana : Mpampianatra katekomena, mpitendry orga, mpikirakira fàfana, tranokala, mpampianatra sekoly alahady, mpandinimbola, régisseur, biraompiangonana ary sonorisateur. Nanao vavaka ny Mpitandrina noho ny fahavitan’ny fandraisan-tànana.
Taaorian’izay dia natao ny vavaka fangatahana ny Mpitandrina. Tamin’izany no nitondrany am-bavaka ny Fiangonana, ny mpitodnra Fiangonana, ny Mpitory Filazantsara. Nivavaka izy ho an’ny mpitandrina nitondra ny hafatra, ireo mpanao raharaha avy noraisin-tànana, ny kristiana rehetra manatrika ny fotoana, ny mana-paniriana hiditra Setela. Nentiny am-bavaka ny fanomanana ny fotoana eny Antsonjombe, ny Sampana manana taom-pankalazana amin’ity taona ity. Nivavaka izy ho an’ny ireo sahirana ; marary ; mana-manjo ; ny azon’ny tsy fidiny ; ny voan’ny tsindry hazo lena, ireo manao raki-pisaorana sy voady masina ary mangataka vavaka manokana. Nofaranana tamin’nyv avaka nampianarin’ny Tompo izany.
Natao ny Hira ffpm 748 :1 dia novakiana ny tondrozotra ary natolotra ny tsodrano. Ny andininy faharoa tamin’ny hira 748 no namaranana ny fotoana.Mbola nisy koa ny asa sy fampaherezana taorian’ny fotoana.
Rabako Tovohery no niandraikitra ny fàfana, Ramahery Yves no teo amin’ny fanamafisam-peo, Rabemananoro Jonathan sy Ranaivoson Joël no nandray feo ny toriteny ary Rajaofetra John sy Rajaofetra Antonio no nitendry ny orga sy synthétiseur.
Nandray an-tsoratra : Robel Hanitra – Naka ny sary : Rajaofetra Seta